Doorashada Kuraas Kamid Ah Golaha Shacabka Oo Ka Dhaceysa Magaalooyinka Muqdisho Iyo Garoowe. – Bulsho News
Doorashada Kuraas Kamid Ah Golaha Shacabka Oo Ka Dhaceysa Magaalooyinka...
Doorashada Kuraas Kamid Ah Golaha Shacabka Oo Ka Dhaceysa Magaalooyinka Muqdisho Iyo Garoowe.
Guddiyada hirgelinta doorashooyinka Dowlad Goboleedka Puntland iyo Gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa Maanta oo Arbaco ah waxaa ay Magaalooyinka Garoowe & Muqdisho ku kala qabanayaan doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka.
Guddiga doorashooyinka Gobolada Waqooyi ayaa Dugsiga tababarka Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho ku qabanaya doorashada lix kamid ah kuraasta Golaha Shacabka, kuwaas oo loo diiwaangeliyay musharrixiintii ku tartami lahaa, waxaana kuraasta la dooranayo Maanta ay kala yihiin.
2:Hope#271 oo uu ku fadhiyo Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye
3:Hope#269 oo uu ku fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Kaamil.
4:Hop286 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyo Wasiiru dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa.
5:Hope#267 oo ay hadda ku fadhiso Saynab Maxamed Caamir.
6:Hope#236 oo uu ku fadhiyo Cadnaan Cismaan Cilmi (Boqore) oo bedelay Aabihiis oo ka geeriyooday kursigaan.
Dhinaca kale Guddiga doorashooyinka heer dowlad Goboleed ee Puntland ayaa Maanta Magaalada Garoowe ku qabanaya doorashada lix kamid ah kuraasta Golaha Shacabka, waxaana kuraasta la qabanayo & musharrixiinta ku tartamaya ay kala yihiin.
1:Hop192 oo uu ku fadhiso Saciido Maxamed Xasan, balse ay ku tartami doonaan Maxamed Faarax Nuur & Ruweydo Maxamuud Maxamed.
2: Hop094 oo uu horay ugu fadhiyay Axmed Ismaaciil Shabeel ayaa loo bedelay kursi Haween, waxaana ku tartami doona Sahra Cabdullaahi Cigaal & Fardus Maxamed Aadan.
3: Hop014 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay ku fadhiday Sacdiya Careys Ciise, balse laga reebay ayaa waxaa u tartami doona Daa’uud Cabdikariin Sheekh Cumar & Cabdirisaaq Axmed Xuseen.
Hop0121 oo ay ku fadhiso Canab Xasan Cilmi ayaa waxaa ku tartami doona Farxiyo Yuusuf Cumar & Nimco Cumar Cabdi.
5: Hop0174 oo uu ku fadhiyo Burhaan Aadan Cumar ayaa waxaa Maanta ku tartamaya Khadro Axmed Maxamed & leylo Cabdi Faarax.:
6: Hop074 oo ay hadda ku fadhiso Ikraan Yuusuf Xirsi ayaa waxaa ku tartamaya musharrixiinta kala ah Cabdiqani Maxamuud Maxamed & Axmed Cabdiraxmaan Cilmi.
Guddiga doorashooyinka Puntland iyo kan Gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa horay Muqdisho & Garoowe ugu qabtay doorashada Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka, waxaana la filayaa in Maamulada kale ee dalka ay dhawaan qabtaan doorashada kuraasta Golaha Shacabka.